I-OnePlus 7 Pro ifika eSpain ngokusemthethweni | I-Androidsis
Kwiveki ephelileyo I-OnePlus 7 Pro yaziswa ngokusemthethweni, iflegi entsha yohlobo lwaseTshayina. Ifowuni luphawu olukhulu kwinkampani, ebonisa eyona fowuni yayo intle okwangoku. Le yinto abathengi bayibonileyo, kuba ifowuni ibine impumelelo enkulu kubhukisho lwakho, ubuncinci e-China.
Ngoku Ukuqaliswa ngokusesikweni kwale OnePlus 7 Pro eSpain kuyabhengezwa. Isiphelo esitsha esitsha sophawu lwesiTshayina similiselwe kwilizwe lethu. Inikwe njengemodeli ebizwa ngokuba yimodeli enjengeGPS S10 okanye uluhlu lweHuawei P30. Isiphelo esiphakamileyo ngokuqinisekileyo esenza umdla omkhulu.
Abasebenzisi abanomdla sele bekhona banokuthenga ifowuni ngokusemthethweni eSpain. Sele ithengisiwe kwiwebhusayithi yenkampani, nakwezinye iivenkile ezikhethiweyo, ezinjengeMediaMarkt. Le OnePlus 7 Pro yindawo ephezulu ekulungeleyo ukuvelisa inzala, kuba ifika ngexabiso eliphantsi kunabo bakhuphisana nabo.
Sifumana iinguqulelo ezininzi zokuphela okuphezulu, kuxhomekeke kwi-RAM kunye nokugcinwa kwazo. Ukuze wonke umntu abe nakho ukukhetha uhlobo lwesi sixhobo olulungele bona. Uhlobo oluqhelekileyo yi-6/128 GB, efika ngexabiso lama-euro angama-709 ezivenkileni. I-8/256 GB inye ixabisa i-euro ezingama-759 kwaye eyokugqibela, nge-12/256 GB, iphehlelelwe i-euro ezingama-829.
Ngale ndlela, sinokubona ukuba i-OnePlus 7 Pro iveza ezinye amaxabiso asezantsi kunabantu abaninzi okhuphisana nabo. Ngokukodwa ukuba siyithelekisa neemodeli ezifana neGPS S10 okanye iHuawei P30 Pro.Le yinto enokwenza abasebenzisi abaninzi banomdla kule fowuni yohlobo lwesiTshayina.
Iifowuni zabo zithengiswe kakuhle kunyaka ophelileyo. Ndiyabulela koku, kuye kwakho umsantsa phakathi kwe- Iimpawu ezintlanu ezithengisa kakhulu kwicandelo leziphelo eliphezulu. Le OnePlus 7 Pro ibizwa ukuba ibe ngumthengisi othengisa kakhulu, oya kuthi ngokuqinisekileyo uncede ukomeleza esi sikhundla kwinkampani. Siza kubona ukuba intengiso yaseSpain iyifumana njani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OnePlus 7 Pro isungulwe ngokusesikweni eSpain
[VIDEO] Amaqhinga alishumi elinanye alungileyo okufumana i-Samsung Buds ye-Samsung